Caqli-gal ah: Mirai (DDoS) Code iyo Iibsiga Diidmada
Ka dib kobcinta xeerka loo isticmaalo in lagu fuliyo khadka weyn ee internetka, Artem Abgarian, The Sare Maareeyaha Guusha Macaamilka Sare, wuxuu aaminsanyahay in aanu ku jirno bilawga daadadka weerarrada kale ee internetka. Horumarinta xeerka ayaa loo qaabeeyeywaxaa loogu talagalay in lagu beegsado aalado isku xiran oo aan la ilaalin. Kuwaas waxaa ka mid ah kaamirooyinka, jidadka, telefoonnada iyo aaladaha kale ee la jabsado. Koodku wuxuu wax ka qabanayaaiyaga oo ku dhejiya "gowska baabuurta", ka dibna bartilmaameedyada shabakadaha leh iyagoo doonaya in ay garaacaan xayiraad.
Falanqeeyayaasha amniga ee shabakadda waxay ku magacaabaan lambarka "Mirai" - nikon cursos de fotografia. Waxay ka dambeysay weerarka cirka ahbarta internetka ee blogger oo lagu magacaabo Krebs On Security. Brian Krebs waa khabiir amniga ah iyo baqshad hanti dadweyne. Waxa uu tilmaamay in daabacaaddakoodhka kaas oo ka muuqday shirarka hackers 'usbuucii hore.
Mid ka mid ah maqaaladiisa, Krebs ayaa ka digay weerarrada sii kordhaya ee internetkaQalabka (IoT) qalabka. Khasaarayaasha, mas'uulka ka ah weerarradan waxay isticmaalaan qalabkan si ay u duqeeyaan boggaga internetka iyagoo codsiyo, dhisaya gaadiid ku filandhaafi karaan serverka. Iyadoo aan awood u lahayn in ay soo bandhigto dhammaan martida ay la socdaan waxyaabaha ay u baahan yihiin, website-ka ayaa xirmaysa ugu dambeyn.
Hackers ayaa hore u isticmaalay weerarrada DDoS horay si ay u garaacaan boggaga internetka. TheBoqortooyada Midowday (UK) waa waddanka labaad ee ugu muhiimsan ee Maraykanka ka dib. 'Weerarrada DDoS waxay beegsadaan mashiino gaar ah, server ama website. Waxay yihiin ataxane ama shabakad "botnets" oo wada shaqeynaya si ay u fuliyaan codsiyada fudud ee website-ka..Waxay waydiisanayaan macluumaadka isla mar ahaantaanawaxay u duqeeyaan barta ay ku badan tahay oo ay awood u leedahay inay shaqeyso.
Haddii hacker uu maamulo si uu u muujiyo qalab nugul oo isku xira internetka.Waxay kashaqeyn karaan dayacaadyadan si ay ugu xirxiraan inay xiriir la yeeshaan server dhexe. Unknown ee user, weerarka fulinIsticmaalidda qalabkaani waxay kordhinaysaa saameynteeda.
Xaaladda Krebs, weerarka DDoS ayaa ku dhuftay Krebs Websaydka Amniga guud ahaanoo ah 620 gigabytes of data by labaad. Waa wax ka badan taraafikada ku filan in ay qaadaan boggag badan oo hadda jira.
Brian Krebs, milkiilaha, ayaa soo wariyay in dhibaatada Mirai ay ku faafto kuwa nugulqalabyada adigoo ku raadinaya internetka si aad u raadisid qalabka IoT ee lagu ilaaliyo goobaha warshadaha caadiga ah, ama adeegsadaha adag iyo lambarada sirta ah.
Asalka iyo milkiilaha qaanuunku waa mid aan qarsoodi ahayn. Si kastaba ha ahaatee, qofkawaxay sameysay koodhka koodhka isticmaalka magaca "Anna-senpai". Waxay sheegteen in ay shaqaaleysiiyeen oo kantarooleen kumanaan qalab ah oo ay ka mid yihiin arsenal.Qoraal online ah, khaniisiinta ayaa sheegay in tallaabooyinka counter-gooyooyinka ay qaadeen website-yada si ay u nadiifiyaan falalkooda ay sameeyeen qulqulayawaxtarka leh ee khayaanada. Xitaa sidaas, xeerku wuxuu sii wadaa inuu qoro qalab aad u badan.
Thanks to Mirai malware, malaayiin ka mid ah qalabka isdhexgalka ee jilicsan ayaa istaagayu nugul kantaroolka xakamaynta by hackers iyo loo rogay botnets si loo barto websites. Marka laga hadlayo MailOnline, Tony Anscombe ee AvastAmmaanka ayaa sheegay in qalabyada oo dhan ay u adeegaan sidii loo heli karo qodobbada laga heli karo hackers. Waxay u yeedheysaa su'aasha habka ay soo saarayaasha iyoisticmaalayaasha waxay aaminsanyihiin qalabkan.
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee isticmaaluhu u hubin karo qalabkooda waa inay ku hayaan qalabkoodasi joogta ah u joogtee oo sii wado fiiro kasta ee soo saarayaasha soo saarayaasha. Labaad, si qarsoodi ah u buuxi faahfaahinta magaca isticmaalaha iyo sirta, kala goonilaga bilaabo goobaha caadiga ah waa hab fiican oo loo ilaaliyo qalabkan. Ugu dambeyn, dadka isticmaala waa inay isticmaalaan wax kasta oo amniga ah, oo khuseeya aqalabka, kaas oo gacan ka geysan kara ka hortagga weerarada.